श्वेताको दोस्रो बिहे नेपाली चलचित्रकर्मीमध्येकै अहिलेसम्मकै खर्चिलो – Khabaarpati
श्वेताको दोस्रो बिहे नेपाली चलचित्रकर्मीमध्येकै अहिलेसम्मकै खर्चिलो
December 14, 2020 December 14, 2020 Khabar PatiLeaveaComment on श्वेताको दोस्रो बिहे नेपाली चलचित्रकर्मीमध्येकै अहिलेसम्मकै खर्चिलो
काठमाडौं । फिल्म कहाँ भेटिएलाबाट नेपाली चलचित्रमा डेब्यू गरेकी नायिका श्वेता खड्काले करोडपति ब्यबसायीका छोरा विजयेन्द्रसँग धुमधामले विबाह गरिन् । सिन्धुपाल्चोकमा माझीबस्ती निर्मण गरिसकेी श्वेताले विजयेन्द्रसँग धुमधामसँग नेपालको सबैभन्दा महंगो ५ तारे होटल गोकर्ण रिर्सोटमा धुमधामले गरिन् । श्वेताले करोडौँ खर्च गरेर गरिन् । श्वेता र विजयेन्द्रको विबाह १ करोडको हाराहारीमा खर्च भएको बताइन्छ । ३ दिनसम्म चलेको विबाह नेपाली चलचित्र उद्योगकै सर्वाधिक महंगो बिहे भएको बताइन्छ । जुन विबाहलाई अहिलेसम्मको भव्य विबाह भएको समेत बताइन्छ ।
धुमधामले विबाह सकिए लगत्तै श्वेता पनि विजयेन्द्रका साथ परिवारका सबै सदस्यहरुसँग अन्तरवार्तामा देखिएकी छिन् । एक युट्युवसँगको कुराकानीका क्रममा श्वेतालाई उनकी सासुले श्वेतालाई बुहारीको रुपमा नभई छोरीको रुपमा स्विकारेको बताएकी छिन् । श्वेताकी सासुले श्वेता आफ्नो कान्छो छोराको पेमिकाका रुपमा घरमा आएका कारण श्वता बुहारीका रुपमा भित्रिए पनि आफ्नो छोरी नभएका कारण पनि श्वेतालाई छोरीकै ब्यबहार गर्ने उनले बताइन् ।
सो अवसरमा श्वेताका ससु्राले श्वतेतालाई बुहारीको रुपमा स्विकार्न पाउँदा आँफुहरुको छाती पनि चौडा भएको बताए । त्यस्तै श्वेताका जेठाजु दिपेन सिंह रावतले श्वेतालाई बुहारीको रुपमा स्विकार्न पाउँदा निकै खुशी लागेको बताए ।,,,भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोला,,,
त्यस्तै श्वेताका पति विजयेन्द्र सिंह रावतले आँफुले श्वेतालाई प्रस्ताव राखेको र श्वेताले आफ्नो परिवारको नाम अझै उज्जल बनाउन भूमिका खेलेको बताए । खुशी आँफुले नदिई श्वेताले दिएको तर आँफुले श्वेतालाई मन पराएर साथ दिएको विजयेन्द्रले बताए । विजयेन्द्रले आँफुहरुले पछिल्लो २ महिनादेखि लुकेर डेटिगं गरिरहेको समेत उक्त अन्तरवार्तामा बताएका छन् । उक्त अन्तरवार्तामा श्वेताकी जेठानी दिदी सुजताले पनि रावत परिवार निकै शान्त, सभ्य र ब्यबस्थित बनेको बताइन् । श्वेताकी सासुले सुजातालाई हुनेवाला जेठी बुहारी भनेर परिचय गराइन् । सुजाताले औपचारिक रुपमा विबाह नगरेको भएतापनि परिवारले भने स्विकारिसकेको छ । हेर्नुहोस् भिडियो
नेपालबाट ठमठम हिँडेर खुशी हुँदै घर छोडेका याम मलेसियामा नै अस्ताए
जोम्बी एन्जेलिना जोलीलाई १० वर्षको जेल सजाय
यसकारण जोन सिनाले चीनसँग चिनियाँ भाषामा मागे माफी (भिडियो सहित)
May 31, 2021 goodmam
अनमोलले निकै महंगो पारिश्रमिकमा ‘एक्स ९’ मा सम्झौता गरे, सुनिल सेट्ठीलाई पारिश्रमिक दिन नसकेपछि सोनु सुदलाई ल्याउने
आफूभन्दा ७ वर्ष कान्छा प्रेमी रोहनसँग विवाह बंन्धनमा बाधिँइन चर्चित गायिका नेहा कक्कर (भिडियो)
October 25, 2020 goodmam
भिडियो कलमा गो’प्य अं’ग हेरा-हेर गर्नाले घर-बार नै बि’ग्रियो September 24, 2021
फेरि घट्यो सुनको मूल्य, आज कतिमा हुँदैछ कारोबार ? September 24, 2021
यो पढेपछि तपाइले केरा कहिलै भुल्नुहुने छैन… September 24, 2021
सुन्दा मात्रै पनि अच्चम : मृ त श्रीमतीको ला शसँग ६ घण्टा लगातार सम्बन्ध ! September 24, 2021
वर्षौंदेखि बेकार फलिएको सिलाई मेसिनको गोप्य घर्रा खोल्दा जे देखियो … September 24, 2021